Isingeniso kwiBedrug Pickup Truck Bedliner
Iloli lam elidala le-F-150 sele lilinomkhumbi oqinileyo kulo xa ndithenge. Umbhede wasebenza kakuhle njengokhuseleko lombhede, kodwa ndandifuna ukuzama into eyahlukileyo kwilori entsha - iimbambo ezinzima, ezide kumgangatho we-liner yangaphambili zenza ukuba izinto zibe nzima kakhulu kwizinto eziqhelekileyo. Emva kokukhangela malunga nayo yonke indawo yokulala emakethe ndakhetha i-Bedrug®, umbhede owenziwe kwiifayili zeplastiki ezithambileyo. Iindleko: malunga ne-$ 330.
Iwaranti: umnikazi wangaphambili uhlanganiswe nje ngokuba unalo iloli.
Delivery Bedlinerer Delivery
I-Bedrug yayigcwele kwaye ihanjiswa kwibhokisi enye. Ndayifake ngaphandle, ngoko ke kwafuneka ndilinde usuku olunezidanga ezingama-65 ukuqinisekisa ukuba izibambiso zokubambelela ezibethelela embhedeni ziya kuba zinamathele ngokwaneleyo ukuba zinxibelelwano olungasigxina kunye nesinyithi.
Ndayichitha i-Bedrug kwaye ndayifaka kwi-driveway. Kwakubonakala ngathi "i-T" enkulu, kuba iinqununu eziya kumacala eloli zazingeniswa ukuze kube lula ukupakisha nokuthumela.
Ndiyeke i-bedliner ihlale ilanga ukuze ikwazi ukunyaniseka xa ndihlambulula ibhedi yeloli, ngoko ndayiphakamisela emacaleni kwaye ndayifake kwibala lokulala. Ukukhupha isitya sokulala kumbhedlele kwakuyimisebenzi elula kumntu omnye. Yonke into yokufakela yenzeke emva kokuba umbhede elele embhedeni.
Isibhedlele sinobhedlele kunye nenkqubo yokukhwela kunye nelopu efana neVelcro®.
Izibopho zikhonjiswe kwi-liner kunye nezikhonkwane ezixhomekeke kumbhede ngamacwecwe okubamba.
Ukufakela konke kwathatha malunga neyure kwaye kwakulula ukwenza.
Kukho ukhetho oluninzi ukuba ufuna ukulungelelanisa iBrugrug ecaleni kwintsimbi engapheliyo okanye ezinye izixhobo. Nokuba unqumle umtya kwiBedrug uze ubakhokelele okanye ususe izinto uze uphinde uzifake kwi-bedliner.
Kwakhiwa kweBhedrug Bedliner
I-Bedrug ibheka njenge-carpeting kwaye iziva iyancipha kwi-touch, kodwa yenziwe ngefayili yeplastiki. Umenzi ubiza umnqweno ongaphantsi kwe-"intsimbi yamatye evaliweyo." Akukho nxalenye ye-Bedrug eyamathisa i-liquids - nayiphi na into endiyichitha kwi-bedliner kude kube ngokuza kunye nefowuni esuka kumbhobho wegadi. Umenzi uthi ungasebenzisa kwakhona isherity ingcinezelo ezaliswe isisombululo sesepha ukucoca i-Bedrug.
I-Bedrug nganye ibunjwa ukuze ifanelwe imodeli ethile yeloli. Umgca womgangatho wenziwe uhleli phakathi kwezimbambo ukuze unike umgangatho womgangatho womgangatho ogqithisileyo-ubonakala ulungile kwaye kulula ukuguqa. I-Bedrug yam ilungele ngokupheleleyo kuyo yonke indawo, kubandakanywa namacandelo ombhede owandisa iindonga zokulala kunye neelwandle.
Umenzi uthi i-Bedrug ayikwazi ukuba yonakaliswe okanye iwonakaliswe yi-"acid", i-solvents, i-compounds compounds okanye i-petroleum products ". Andizange ndichithe okuninzi kwi-bedliner yam kodwa, ngoko andinakukunika ingxelo yokuqala ngolu hlobo lwazo zonke iikhemikhali, kodwa ndivile ukuvakalisa okwaneleyo amazwana avela kwamanye abanikazi beloli ukuba bathathe ibango ngokukodwa.
Ngaba Ndingayithenga kwakhona i-Bedrug Bedliner?
Ewe-ndivuyiswa kakhulu ngebhedi yeBedrug. Kubonakala kulungile kwaye kulula ukuyicoca.
I-liner ikhusela ibhedi kunye nesitrato sayo, i-soft surface i-cushions nayiphi na into ephosakeleyo ndiyigqiba ukukhwaza, njengenfenethi umfazi wam ufumana kwiivenkile ze-antique kunye neemakethe ezithengisa.
Sineemvula ezininzi kungekudala kwaye ndiye ndaqaphela ukuba ihamba ngokukhawuleza kwinqanawa yaseBergrug kwaye iphuma ebhedini ngaphandle kokuhlanganisa.
I-Bedrug ihlala ihlala njalo-inokubamba nantoni na into oyifunayo ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuba iya kuthinta njani i-liner.
Impendulo yodwa kwiBedrug yile mfuneko yokufakelwa kwee-65-degree. Ukuba uthenge iBrugrug ngexesha lokubanda kwimozulu kufuneka ufake kwigalaji elifudumele okanye ufumane enye indawo efudumeleyo ukuze usebenze kuyo.
Gcina i-A / C yakho kwi-Top Shape
Indlela yokukhetha iCape Truck
UkuCwangcisa iBhokisi yeeLebhu yeeLikethi
I-Cover Retrax Pick Cover Cover
I-Java: Ifa, i-Superclass, ne-Subclass
Yeyiphi Intlungu! Indlela yokusebenzisa i-Verb yeSpeyin 'yeDraer'
'IGrey's Anatomy' Isikhathi 4 Iingqungquthela zezihloko eziphambili
Impahla yokomoya kunye nePhiliso yeKyaniti
Ukuphucula i-Algebra Content Isigama! Bhala izibongo!